किन पूज्ने शिवलिङ्ग ? | Shashwat Dham
essay for dummy phd thesis in network security master thesis theme marketing dissertation of david carawiay personal strengths essay graduate school essay
किन पूज्ने शिवलिङ्ग ?
शाश्वतधाम, नवलपुर । अहिले हरेक मानिसमा भगवान प्रतिको आस्था बढेको छ ।
विदेश जाने कुरा होस् या ब्यपार बिजनेश गर्ने कुरामा एक पटक भगवानको नाम लिएकै हुन्छ । हरेक भगवान को आ–आफ्नो महत्व र आस्था रहेको छ । त्यस्तै एक आस्था मध्यका एक हुन भगवान शिव । उनको हिन्दुधर्ममा अलि छुट्टै महत्व रहेको छ ।
उनै भगवान शिवको प्रतिक मानिने शिवलिङ्गको महत्व यस्तो रहेको छ । ब्रह्माण्डमा रहेको उर्जा पदार्थमध्ये हाम्रो शरिर पदार्थबाट बनेको हुन्छ भने आत्मको रुपमा उर्जा रहेको हुन्छ । यसै प्रकारले शिवलाई पदार्थ र शक्तिलाई उर्जाको प्रतीक मानेर शिवलिङ्गको पूजा गरिन्छ ।
राम र रावणलले पनि शक्ति अर्जनका लागि समेत शिवलिङ्गको पूजा गर्ने गरेको विश्वास रहेको छ । अनन्त ज्योतिलिङ्गलाई सर्वोच्च शक्तिका रुपमा लिने गरेको धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ । उसैको एक अंशको रुपमा शिवलिङ्गलाई लिने गरिन्छ । असीमित र रहस्यमयी शक्ति हुने भएकोले शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले मानिसलाई एकाग्र हुने र आफ्ना उद्देश्यमा ध्यन केन्द्रित गर्न प्रेरणा मिल्ने विश्वास गरेको पहिन्छ ।
नेपालमा रहेको प्रख्यात ६४ शिवलिङ्गको दर्शन पछि सम्पुर्ण पापबाट मुक्त भई मनोकांक्ष पुरा हुने विश्वस गरिन्छ । नेपालमा रहेका प्रख्यात ६४ शिवलिङ्ग प्रति समर्पित गर्दै पवित्र धार्मीक स्थल शाश्वतधाममा पनि १०८ शिवलिङ्गको स्थापना गरीएको हो । जस मध्य मुख्य शिवलिङ्ग पशुपतिनाथको स्वरुपमा स्थापना गरीएको छ ।
सस्कृत भाषामा लि∙को अर्थ प्रतीक हुने भएकालेशिवलिङ्ग लाई भगवन शिवको प्रतीकको रुपमा लिईन्छ । शिवलिङ्गको अर्थ भगवन शिवको चिन्ह,निशानी,गुण,ब्यवहार वा प्रतीक हुन्छ । भगवन शिवको प्रतीकका रुपमा अधिकांश भगवन शिवको मन्दिरमा शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको हुन्छ ।